March 13, 2018 – Thutastar
ဒေါသထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာ နှာဘူးတစ်ကောင်ပေါ်ကိုခုန်အုပ်ပြီးတော့ သူ့ရင်သားနဲ့ ထိုသူ့မျက်နှာကိုပွတ်ကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နှာဘူးတွေဟာ လူတကလူတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးသူတွေပါပဲဒါပေမယ့် ဒီလိုလူတွေနဲ့ လူတွေကြားထဲမှာ ကြုံရတဲ့အခါ သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေသွားပါပြီ။ သူဟာ အဝတ်ချွတ်ပြီးတော့ နှာဘူးပေါ်ကို ခုန်အုပ်ကာ သူ့ရင်သားနဲ့ ထိုသူ့မျက်နှာကို ပွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ဘရာဇီးမှာရှိတဲ့ Ribeirao Preto စင်တာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနီးအနားကလူတိုင်းဟာ ဒါကိုဖုန်းတွေနဲ့ရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ သင်တွေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဒီဗီဒီယိုတွေဟာ နယ်ခံလူတွေမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်ပေါ်ကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သိရှိသွားပါတယ်။ “”ဒေါသထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာ နှာဘူးတစ်ကောင်ပေါ်ကိုခုန်အုပ်ပြီးတော့ သူ့ရင်သားနဲ့ ထိုသူ့မျက်နှာကိုပွတ်ကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်”။ အမျိုးသမီးဟာ ထိုသူကိုလူအုပ်ကြားထဲမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထိုသူကတော့ သူ့မိန်းမနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်လာတာဖြစ်ပြီး ဘာအမှားမှမလုပ်မိကြောင်းအပြစ်မရှိသလိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒေါသထွက်နေတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ ဘာကိုမှနားမထောင်တော့ပဲ သူလုပ်ချင်တာကို လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူအုပ်ကြီးဟာလန့်ဖြန့်သွားပြီး အော်ဟစ်သံတွေ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေး အေးမြတ်သူမှာ ပုရိသတွေ မျက်စောင်းထိုးနေတဲ့ အပျိုကြီးစာရင်းဝင် အမျိုးသမီးအနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ပရိသတ်တွေကတော့ အပျိုကြီးပဲ လုပ်ပါဆိုပြီး အေးမြတ်သူကို မကြာ ခဏ fb Comment တွေကတစ်ဆင့် တိုက်တွန်းထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပါးချိုင့်မင်းသမီးလေး မမြတ်လေးကရော ..အပျိုကြီးပဲ လုပ်မှာလား..? အေးမြတ်သူကတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာ သတို့သမီးအရံအဖြစ် ပါဝင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာညစာစားပွဲကိုလည်း ဖက်ရှင် အလန်းလေးနဲ့ တက်ရောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စကားပြောရင် ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တဲ့ အေးမြတ်သူကတော့ သူမရဲ့ IG မှာ ပုံတစ်ပုံတင်ထားပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း အဲ့ဒီပုံလေးကို အတော်လေး သဘောကျနေပါတယ်။ ပုံကတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲက ပုံလေးပါ။ ပုံရဲ့ caption မှာတော့
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ မေးခွန်းပေါက်ကြားခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် တစ်နာရီခန့်စော၍ စာမေးပွဲမေးခွန်း တင်ခဲ့သူအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပညာရေးမှူးရုံးမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (စီမံ)က ၆၆ ဃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ပဲခူး အမှတ်(၂)မြို့မရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိက The Ladies သို့ ပြောသည်။ “မနေ့က (မတ်လ ၁၂ ရက်) ဆရာမတွေလာပြီး ဆယ်တန်းမေးခွန်းပေါက်တဲ့ကိစ္စ အမှုဖွင့်သွားတာပါ” ဟု တာဝန်ကျရဲအရာရှိက ပြောသည်။ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲ စတုတ္ထနေ့ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ် ဖြေဆိုသောနေ့တွင် ဓာတုဗေဒဘာသာရပ် မေးခွန်းများ Online ပေါ်တွင် Sayar Bone အကောင့်ဖြင့် တင်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဒေါ်မေသက်နွယ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့လယ်ခေါင် လတ်ဖရော့တ် ကုန်တိုက်ကြီးထဲမှာ မြန်မာလူရွယ် ၁၀၀ ကျော် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြေးလွှားနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ ခုရက်ပိုင်းတွင်း လူမှုကွန်ရက်ပေါ် ပျံ့နှံ့နေကာ ဝေဖန်မှုတွေလည်း မြင့်တက်နေပါတယ်။ အဆိုပါ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို Chamaiporn Changsiri ဆိုသူက သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်မှာ “ကြည့်စမ်း- ဒါ တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ မှတ်ချက်နဲ့အတူ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေ့မကူးခင် ၀င်ကြည့်သူပေါင်း ၉ သိန်းကျော်သွားသလို ရန်ဖြစ်သူတွေကို ပြစ်တင်ဝေဖန်ဆဲဆိုမှုတွေလည်း မြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ လက်အောက်ခံ အွန်လိုင်းမီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး ဗဟိုဌာနက လတ်ဖရော့တ်ကုန်တိုက်တည်ရာ ချုတ်ချိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ မှာ စခန်းမှူးက အဆိုပါအဖြစ်အပျက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေ
ထူးထူးဆန်းဆန်း မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာ
Comments Off on ထူးထူးဆန်းဆန်း မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာ
ထူးထူးဆန်းဆန်း မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာ အိပ်မက်များလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ တကယ်ကြီးပါဗျာ။ ကျောက်တန်းကနေ ၉. မိုင်ခွဲဝင်ရသေးတယ်။ ရွာနာမည်က. ဝဲကြီးရွာ တဲ့။ ကဗျာမဆန်ပေမဲ့ ပနံရတဲ့ရွာပေါ့ ။ အိမ်တိုင်းမှာအမှိုက်အိတ်လေးတွေ ရှိသလို လမ်းဘေးမှာလဲ အမှိုက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ ထွက်လာတဲ့အမှိုက်ကို စွန့်ပစ်ဘို့ စနစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုက ရွာရဲ့အဆင့်အတန်းပဲ။ အမှိုက်ကင်းစင်ဘို့ငွေကုန်စရာမလိုပါဘူး။ စည်းကမ်းရိရင် ရပြီ။ ညီညွတ်ကြရင် ရပြီ။ မြန်မာပြည်က ရွာတိုင်း၊ရပ်ကွက်တိုင်း ဒီလိုအမှိုက်ကင်းစင်ဘို့ ဘာတွေများ လိုအပ်နေပါလိမ့်။ နိုင်ဝင်း(မင်းဥက္ကာ) ထံမှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။ ထူးထူးဆနျးဆနျး မွနျမာပွညျက အမှိုကျမရှိတဲ့ ရှာ အိပျမကျမြားလားလို့တောငျ ထငျမိတယျ။ တကယျကွီးပါဗြာ။ ကြောကျတနျးကနေ ၉. မိုငျခှဲဝငျရသေးတယျ။ ရှာနာမညျက. ဝဲကွီးရှာ တဲ့။
Comments Off on ပဋ္ဌာန်း မှန်မှန် ၊ နှစ်ရှည် ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးမျာ၉းကို ယုတ္တိ သဘောဖြင့် ဆင်ခြင်ကြည့်ခြင်း
ပဋ္ဌာန်း မှန်မှန် ၊ နှစ်ရှည် ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးမျာ၉းကို ယုတ္တိ သဘောဖြင့် ဆင်ခြင်ကြည့်ခြင်း ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ် ဆိုတာ ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယ ဥဒေသ နဲ့ ပစ္စယနိဒေသ တို့ကို ရွတ်ဆိုတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကို အရှင်သာရိပုတ္တရာ က မကျဉ်းမကျယ် ပြန်ဟောထားတဲ့ ပဋ္ဌာန်း ၅ ကျမ်း ကိုတော့ မြည်သံမစဲ ပဋ္ဌာန်းပွဲ ဆိုပြီး ရွတ်ဆိုကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကတော့ ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယ ဥဒေသ နဲ့ ပစ္စယ နိဒေသကိုပဲ ရွတ်ကြပါတယ်။ အသံမှန် နဲ့ ရွတ်ရင် နာရီဝက်လောက် အလုပ် လုပ်ရပါတယ်။ အသံထွက်ပြီး ရွတ်ရပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် နားမလည်ခင်ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါ ….
Comments Off on မသင်္ကာစရာ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ တောင်ကြီးမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေး(၂၁) ဦး
တောင်ကြီး တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ကလေး(၂၁)ဦးကို မသင်္ကာသဖြင့် ခေါ်ယူစစ်​​ဆေး ဆီဆိုင်-တောင်ကြီးပြေးဆွဲနေသည့် အောင်သပြေကားပေါ်ပါလာသော အမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့် ကလေးငယ် ၂၁ ဦးကို တောင်ကြီးသစ်တော ဂိတ်အရောက်တွင် မသင်္ကာသဖြင့် မတ်လ၁၁ရက်နေ့က မြို့မရဲစခန်း က ခေါ်ယူမေးမြန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ “မသင်္ကာလို့ခေါ်စစ်ဆေးတာပါ၊ အမှန်တကယ်ပရဟိတကျောင်းကိုပို့ ဖို့ခေါ်လာတဲ့ကလေးတွေပါ၊ ပခုက္ကူမြို့မုန့်လုံးတောင်ပရဟိတကျောင်း ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းဆက်ပြောလာတာဖြစ်တယ်၊ အခုတော့ပြန်လွတ်ပေးတော့မှာပါ”ဟု တောင်ကြီးမြို့မ စခန်းမှူက ပြောသည်။ ကလေးငယ် ၂၁ဦးသည် ၆နှစ်မှ ၁၀နှစ်အတွင်းများဖြစ်ကြပြီး ယောက်ကျားလေးများဖြစ်ကြကြောင်းသိရသည်။ ကလေးကိုခေါ်လာသည့် အမျိုးသမီး ဒေါ်မြင်မြင့်နွယ်က ရဲစစ်ချက်အရ “ကျွန်မ အမအရင်း ကျောင်းဆရာမက စိန်ဖြီးနာရွာမှာတာဝန်ကျစဉ် အမနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ အခု ပခုက္ကူ သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့ စိန်ဖြီနာရွာက စားဝတ်နေရေးနဲ့ ပညာရေးအခက်ခဲ ရှိတဲ့ကလေးကိုခေါ်ပြီး မိဘခွင့်ပြုချက်အရ ပရဟိတကျောင်းကို ပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ် “ဟုထွက်ဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
Comments Off on မွေးဖွားပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ချက်ကြိုးဖြတ်ပြီး ရေထဲသို့ ၂ စက္ကန့်ခန့် မြုပ်လိုက်၊ နှစ်လိုက်ဖြင့် ၃ ကြိမ်ပြုလုပ်ကာ ကြီးပြင်းလာကြသည့် မြန်မာပြည်ထဲက ဆလုံကလေးငယ်များ
ဆလုံလူမျိုးအကြောင်း ဆလုံ လူမျိုး သည် မြိတ် ကျွန်းစု ၏ အဖိုး မဖြတ် နိုင်သော ပြယုဒ်တစ်ခု ဖြစ်ည်။ သူတို့ ၏ ဓလေ့ စရိုက်၊ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်မှု ကိုတုနှိုင်းရန် အရာ မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်း လူမျိုးတို့မှာ လူသိများထင်ရှား နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆလုံ လူမျိုးတို့သည် ပင်လယ် ပြင်တစ်ခွင် ၀မ်းစာ အတွက် လှည့်လည် ကျက်စား ကြသည်။ ရေကူး၊ရေငုပ်ရာ တွင် ကျွမ်းကျင် သည်။ ထို့ကြောင့် Sea Gypsy orMen of the Sea အဖြစ် အမည် တွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ဆလုံ တိုင်းရင်းသား တို့ကို “မော်ကင်း”
ထိုင်းလိဂ်ပွဲစဉ် ၅ အပြီးမှာ အောင်သူက အကောင်းဆုံးကစားသမားစာရင်းထဲပါဝင်နေ
Comments Off on ထိုင်းလိဂ်ပွဲစဉ် ၅ အပြီးမှာ အောင်သူက အကောင်းဆုံးကစားသမားစာရင်းထဲပါဝင်နေ
ထိုင်းလိဂ်ပွဲစဉ် ၅ အပြီးမှာ အောင်သူက အကောင်းဆုံးကစားသမားစာရင်းထဲပါဝင်နေ ထိုင်းလိဂ် ပွဲစဉ်(၅)အပြီး အကောင်းဆုံးကစားသမား (၁၁)ယောက်ကို ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် FoxSports က ရွေးချယ်ခဲ့ရာမှာ မြန်မာတိုက်စစ်မှူး အောင်သူ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ PoliceTeroအသင်း တိုက်စစ်မှူး အောင်သူအနေနဲ့ ChainatHornbillအသင်းနဲ့ အဝေးကွင်းပွဲစဉ်မှာ တစ်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့် အခုလို ရွေးချယ်ခံရတာပါ။ အောင်သူအနေနဲ့ ထိုင်းလိဂ်ငါးပွဲ ကစားပြီးချိန်မှာ နှစ်ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ပြီး လန်ဒန်မြို့အခြေစိုက် နာမည်ကြီး အားကစား ၀က်ဘ်ဆိုက် Goal.com ကလဲ ထိုင်း လိဂ်ပွဲစဉ်တစ်ရဲ့ အကောင်း ဆုံး လူငယ်ကစားသမားအဖြစ် သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အသင်း(၁၈)သင်းရှိတဲ့ ထိုင်းလိဂ်(၁)မှာ PoliceTeroအသင်းဟာ အဆင့် (၁၄)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး နိုင်ပွဲတစ်ပွဲ သရေပွဲတစ်ပွဲနဲ့ ရှုံးပွဲသုံးပွဲထိ တွေ့ကြုံထားပါတယ်။ FoxSports ရဲ့
Comments Off on အွန်လိုင်း မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ရဲ့ ဗီဒီယို
အွန်လိုင်း မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုးတို့ရဲ့ ဗီဒီယို ၂၀၁၈ခုနှစ် နှစ်အစမှာ ချစ်ရသူနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ယွန်းဝတီလွန်မိုးဟာ ယခုအခါမှာတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူနဲ့အတူ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ပညာဆက်လက်သင်ယူနေကြပါတယ်။ သူမဟာ ကျောင်းအားရက်တွေမှာ ချစ်သူနဲ့အတူ လျှောက်လည်နေကြတဲ့ ပုံတွေ ၊ပျော်ပါးနေကြတဲ့ ပုံတွေကို အမြဲလိုလို သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ တင်လေ့ရှိပြီး ယခုအခါမှာလဲ သူတို့ ချစ်သူနှစ်ဦး ကြည်နူးနေကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်အတိုလေးနှစ်ခုကို သူမက အင်စတာဂရမ်မှာဘဲ ထပ်မံတင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ ကတော့ သူတို့စုံတွဲကို အရမ်းကိုအားကျနေကြပါတယ်။ ကိုက် တဲ့ ဗီဒီယို အာဘွားပေးနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေး ပရိသတ်ကြီးကြည့်ရှု့နိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး ၂ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါပြီနော်။ မျှဝေပေးလိုက်ကြပါဦး